Dowlada Soomaaliya oo heshiis ku saabsan celinta soomaalida la galayso Norwey - NorSom News
Dowlada Soomaaliya oo heshiis ku saabsan celinta soomaalida la galayso Norwey
Waxaa kulamo saacadan aan joogno ay u socdaan wafdi ka socdo dowlada Soomaaliya oo uu hogaaminayo Wasiirka arimaha dibada Cabdisalaam Cumar Hadliye iyo qaar kamid ah golaha wasiirada Norwey. Sida uu xaqiijiyay afhayeen u hadlay wasaarada cadaalada iyo dastuurtka Norwey waxyaalaha ugu waaweyn ee kulankan looga hadlayo kamid ah in ay dowlada Soomaaliya ay saxiixdo heshiis ku saabsan in dadka soomaaliyeed ee loo diiday sharciga Norwey si khasab ah loogu celin lahaa wadankii. Waxa uuna intaa ku daray in ay wali socdaan kulamadan iyo prosseska heshiiska, iyaga oo aan faah-faahin dheeri kama bixin karin hada.
Heshiiskan ayaa saameyn ku yeelanayo ilaa 500 oo qof oo soomaali ah oo sharciga magangalyada Norwey loo diiday. Waxa uu sidoo kale saameyn ku yeelaan dadka magangalyada codsaday, balse aan wali helin jawaabta. Dowlada Norwey ayaa sidoo kale dhawaan soo saartay go aan ah in soomaalida aan wali qaadanin sharciga degenaanshaha qiimeyn lagu sameyn doono magangalyadooda, maadaama xaalada amni ee Soomaaliya, gaar aahn caasimada, ay wax badan soo hagaagtay.
Wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arimaha dibada Soomaaliya ayaa safar shaqo ku yimid wadanka Norwey, maalintii shalay ahayd, iyaga oo ka qaybgalay kulanka wasiirada arimaha dibada Afrika qaarkood iyo kuwa wadamada NORDICA oo maanta lasoo afmeeray. Arinta la yaabka ah ayaa ah in ay isla maantaba uu wafdiga dowlada kulan ula fariisto dowlada Norwey, iyaga oo an marka hore la kulmin, kana warqaadan jaaliyada soomaaliyeed ee Norwey. Wafdiga dowlada ayaa waxaa sidoo kale kamid ah madaxa laanta socdaalka dowlada soomaaliya General Abdullahi Gaafow. Waxa ayna arinta e egtahay dhabar jabin ay dowlada Soomaaliya ula bareertay muwaadiniinta soomaaliyeed ee nolosha usoo raadsaday wadankan Norwey.
Xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo ayaa ka digay halista ka dhalan karta heshiiskan iyo inta dadka soomaaliyeed ee sharciga loo diidey lagu celiyo wadankii. Baashe ayaa sheegay in dadka qaarkood ay yihiin kuwa wadanka joogay waxbadan, isla markaana kamid noqdey mujtamaca. Wuxuu intaa ku daray baashe in xaalada amni ee gobalada dalka qaarkood, gaar ahaan koonfurta uusan wali aheyn mid la isku haleyn karo, maadaama dhul badan oo kamid ah ay wali awood ku leeyihiin al shabaab.
Dowlada Norwey ayaa horey heshiis lagu celinayo dadka ula gashay Ethopia, iyada oo wada hadalo kula jirta dowlada Ereteriya, iyada oo maantana u eg mid ku guulaysatay heshiis la galista dowlada Soomaaliya.
Previous articleDhalinyaro dhexda u xiratay badbaadinta ubadka soomaaliyeed ee gobalka Østfold.
Next articleUDI-da oo war rasmi ah kasoo saartay sharci kala noqoshada soomaalida aan degenaanshaha qaadan